Mala buuxin doonaa shuruudda 1-aad ee heshiiska doorashada? | KEYDMEDIA ENGLISH
Mala buuxin doonaa shuruudda 1-aad ee heshiiska doorashada?
Indhaha ayaa lagu hayaa sida ay Madaxda Maamullada, Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddiga doorashadu u dhaqan galiyaan heshiiska dhawaan la saxiixay, si looga fogaado dib u dhac kale.
MUQDISHO, Soomaaliya – Saacado kooban ayaa ka dhiman xilliga uu Golaha Wadatashiga Qaran u qabtay dib u billaabashada doorashada kuraasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS, kaas oo bishii hore la hakiyay kadib buuq ka dhashay habka ay u socotay doorashada.
Shirkii lixda maalmood ee Golaha Wadatashiga ku yeesheen teendhada Afisyooni, waxaa lagu go’aamiyay in doorashadda kuraasta Aqalka Hoose lagu soo gaba-gabeynayo mudo 50 cisho ka yar, oo ka billaabaneysa, sabtiga oo ku beegan January 15 illaa Febuary 25.
Hayeeshee, dib u billaabashada doorashada ayaa ku soo beegmeysa xilli, ay bannaan yihiin xilalka ugu sarreeya, Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Federaal iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka.
Xubno ka tirsan Guddiga FEIT, ayaa xilka shir-gudoonka Guddiga, ka qaaday Maxamed Xasan Cirro, kaas oo lagu eedeeyay inuu u adeegay Farmaajo, halka RW Rooble, si guud shaqada uga raacdeeyay todobo xubnood oo ka tirsanaa GXKHDD oo ku milmay siyaasadda.
Gudiga loo doortay qaban qaabadda doorashadda shir-gudoonka Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka, waxa ay sheegeen in doorashadu dhacayso Sabtiga oo ku beegan 15/01/2022, taas oo ka dhacaysa teendhada afisyooni.
Koonfur Galbeed , waxa ay shalay shaacisay jadwalka shan kursi oo doorashadooda la qabanayo 19-ka bisha, hayeeshee, waxaa looga fidhiyaa maridda habraacii lagu heshiiyay, sida shaacinta magacyada saxiixayaasha kuraasta.
Laftagareen, wuxuu ku maqan yahay Turkiga, Qoorqoor, waxaa la sheegayaa inuu dhawaan ka socdaalayo caasimadda, Guudlaawe, wali ma gaarin Jowhar, halka Deni uu maaro u la’ayahay xalka boosaaso, xilli wax ka yar 20 saacadood ka dhiman tahay xilliga la qorsheeyay in din loo billaabo doorashada.